Skien: Booliska oo 100.000 loogu ganaaxay nin ku geeriyooday gudaha qolka xabsiga. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Skien: Booliska oo 100.000 loogu ganaaxay nin ku geeriyooday gudaha qolka xabsiga.
Skien: Booliska oo 100.000 loogu ganaaxay nin ku geeriyooday gudaha qolka xabsiga.
Laanta booliska koonfur-bari ee dalkan Norway ayaa lagu ganaaxay 100.000 kr oo ganaax ah, kadib markii nin aad u khamreysnaa oo ay boolisku soo xireen uu ku geeriyooday gudaha qolka xabsiga magaalada Skien.
Dhacdadan ayaa dhacday bishii April ee sanadkii lasoo dhaafay ee 2020.
Booliska ayaa soo xiray nin 53-sano jir ah oo aad u khamreysnaa, waxeyna dhinac-dhinac ugu seexiyeen shamiitada qolka xabsiga oo aan waxbo laga xijin. 30 daqiiqo kadib waxaa ninkaas ku dhacay wadno xanuun sababay inuu u geeriyoodo.
Dhacdadan ayaa dhacday xili xarunta booliska ee Skien uu joogay hal askari oo waardiye ah, iyada oo xiligaas la yareeyay tirada shaqaalaha saldhiga booliska Corona awgiis. Waxaana dacwo lagu furay askarigii masuulka ka ahaa saldhiga habeenkaas ama ahaa madaxa waardiyaha saldhiga.
Maxkamada ayaa hada wax danbi ciqaabeed ah ku weyday askariga la dacweeyay, inkasta oo lagu eedeeyay in qaabka xiritaanka ee ninkaas geeriyooday uu ahaa mid aan wada waafaqsaneyn anshaxa xiritaanka.
Maxkamada ayaa dhanka kale 100.000 kr oo ganaax ah ku xukuntay xarunta uu ka shaqeynayay askarigaas.
Xigasho/kilde: SØRØST POLITIDISTRIKT BØTELAGT FOR DØDSFALL PÅ CELLA.
Previous articleNorway. Haween qaatay talaalka Corona oo caado wareer isku arkay.
Next articleLaga bilaabo maanta waxaad sii dhiiban kartaa codkaaga doorashada.